[Igumbi elinye · Qingyue] Irenti yexesha elide kwiYunivesithi yaseZhongnan/Wu/Tan Hualin/Chu River Han Street/Igumbi elinye lokulala elifudumeleyo linokupheka/ukuvula ibhalkhoni
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu轩
U轩 unezimvo eziyi-38 zezinye iindawo.
Ngoluhlu olungakumbi, ungacofa umfanekiso wam weprofayile ukungena ~
-Igumbi lokulala: Igumbi lixhotyiswe nge-1.8m * 2m ibhedi enkulu ekhululekile, indawo yokulala ethambileyo, kwaye ithembisa ukuba yonke indawo yokulala iya kutshintshwa lundwendwe olunye ukuqinisekisa ukuba ucocekile kwaye ucocekile.
-Indlu yangasese: Ishampoo, ijeli yeshawa, itawuli, itawuli yokuhlamba, ibhrashi yamazinyo elahlayo kunye nentlama yamazinyo, ikama elahlwayo, isomisi seenwele.
-Ikhitshi: ixhotyiswe nge-induction cooker, i-rice cooker, ifriji, iimela kunye neoli elula, ityuwa, i-sauce kunye neviniga, unokupheka (ucoce emva kokupheka, ngaphandle koko umakazi wokucoca uya kubiza imali eyongezelelweyo yokucoca)
-Ukhuseleko: Igumbi lixhotyiswe nge-smart code lock, enokutshintshwa kwindwendwe nganye.Ukuzihlola kulungele kwaye kuyakhawuleza.Uluntu olusezantsi luxhotyiswe ngokhuseleko lwepropathi yeeyure ezingama-24 ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho.
-Abanye: I-100m ye-wireless wif enesantya esiphezulu, i-100-intshi yokubonisa, i-air conditioner, umatshini wokuhlamba impahla, isiporo sempahla, iphepha lokupompa, ibhotile yamanzi ashushu, ikomityi yamanzi, izilayidi ezinerabha.
Le ndlu ikwiZhongnan International Exchange, eDingziqiao, kwiSithili saseWuchang.Phantsi kukho iZhongbai Supermarket, iBhanki yaseTshayina, iBhanki yezoLimo, iBhanki yoLwakhiwo yaseChina, kunye neBhanki yaseGuangfa. Kukho iimarike zokutya, iinkundla zokutya njalo njalo ezikufutshane. Kukho phantse iivenkile ezi-5 ezinkulu ezikufutshane, ezizezommandla ophumeleleyo weSithili saseWuchang, esinendawo yokuhlala efanelekileyo kunye nezixhobo ezifanelekileyo.
Ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya kwisithili sezorhwebo saseZhongnan. Kwisithili sorhwebo, kukho yonke into esuka kwi-Xiaochuan cuisine, barbecue, Bali lobster, Haidilao, Xiaojun liver skewers, njl. Ukuba oku akwanele kuwe njenge-foodie, ke ndincoma. ukuba Hubu Alley. Ungafika apho ngokuthatha ibhasi eyi-15 ukuya kwizikhululo ezisi-7 okanye malunga neeyuan ezili-15. Hubu Alley i nasezirhangeni leminyaka ubudala Hubu Alley ise-Simenkou, Wuchang District, Wuhan Ukongezelela ukwanelisa umlomo wakho, unako kwakhona ukubona ezi:... Iteksti River Bridge, Yellow Crane Tower, Wuchang River Beach Apha ungakwazi thatha isikhitshane se-yuan ezi-2 uyonwabele imbonakalo yemilambo emibini eWuhan.
Umbuki zindwendwe ngu- 轩
Emva kokubhukisha, unokongeza umnini-ndlu ukuze ufumane ulwazi lwegumbi, okanye ungafowunela umnini-ndlu ukuba aqhagamshelane nangaliphi na ixesha.